Nezvedu - Wuxi Lianyou Plastic Viwanda Co, Ltd.
Umbwa muna 2007, Wuxi Lianyou Plastic Industry Co., Ltd iri pecialized mu mukugadzira High arambe achirema polyethylene mutopota uye Fittings kweanopfuura makore gumi nemashanu.
Yedu yepakati zvigadzirwa:
1) HDPE (High arambe achirema polyethylene) mutopota,
2) Simbi waya pajira riya yakasimbisa HDPE rinoumba mutopota,
3) Hole pajira riya HDPE rinoumba mutopota,
4) Skeleton HDPE rinoumba pombi
5) HDPE yakakodzera
Kusarudza prime quality 100% mhandara mbishi zvinhu, vakapakata yemhando yekugadzira mitsara, kushandisa matekinoroji matsva, kuvaka pahunyanzvi hwayo mupurasitiki pombi & kukodzera, ikozvino isu tinozivikanwa sehunyanzvi fekitori yeHDPE pombi & pombi fittings, kunyorera kuri kunyanya kwemvura kugovera, kurwira moto, kuvaka matunhu eruzivha, kuvaka mvura uye dhiraini, simba rekufona, kufambisa gasi, petrochemical, kudiridza kwekurima. Tine chiratidzo chedu - Deeyou.
Chinangwa chedu ndechekupa yakanakisa pombi mhinduro yevatengi, uye kubatsira vatengi kuwana zvirinani kukura & kukura kuti vabudirire kuhwina-kuhwina mamiriro. Chero zvaunoda - zvakakura kana zvidiki - Wuxi Lianyou akagadzirira kuisa ruzivo rwayo kukushandira. Kusvika pari zvino, isu takabatanidzwa muzvirongwa zvikuru zvakawanda mudzimba nekukunze, uye tinofarira mukurumbira wakanaka kwazvo. Tiine ruzivo rwakadai uye masimba, tine chivimbo chekupa mhinduro dzakanakisa pane zvinodiwa nevatengi zvinoenderana nemakwikwi.
Denha isu kusangana nezvinodiwa zvako !!!
Muvambi akapinda muindastiri yepombi, ndokuva mutengesi wepombi.
Makore matatu 'ruzivo rwekutengesa rwakaunganidza imwe mari uye pasocial bhizinesi network.
Wuxi Lianyou Plastic Viwanda Co, Ltd yakavambwa.
Kuwedzera kugona kwekugadzira, kuwedzera mhando dzezvigadzirwa, kubva kune imwechete chigadzirwa kusvika kune akasiyana produts.
Yakanga ichibatanidzwa mukuvaka kwakawanda kwezvivakwa zvemunyika, senge China metro, China njanji yekumhanyisa.
Dhipatimendi rekunze rakavambwa, ndokutanga kusimudzira misika yekukunze.
Vhura USA, Canada, Japan, nePeru misika yepasi rose, uye upe basa rekuvaka kwezvivakwa kune nyika zhinji.
Kubva kune yekutanga nyika sere kuenda kunyika gumi neshanu, tave pedyo kusvika kumisika yepasi rose.
Inofungidzirwa kuvhura nyika makumi masere, uye rega mapaipi edu ashumire nyika zhinji & matunhu.
Iwo makuru ekushandisa minda uye zvakanakira pe PE chubhu zvinotevera:
HDPE (yakakwira density Polyethylene) pombi parizvino dzinopihwa kumusika weChina wepombi pombi. Mapaipi epurasitiki ari kukura zvishoma nezvishoma. Mapaipi ePe, PP-R mapaipi uye mapaipi ePCC anogara nzvimbo, pakati peiyo simba rakasimba rekusimudzira mapaipi ePe ndiye anonyanya kushamisa. Pe machubhu anoshandiswa zvakanyanya. Pakati pavo, pombi yemvura uye pombi yegasi ndiyo misika mikuru yekushandisa.
PE pombi yekuwanirwa mvura ndicho chinogadziriswa chetsika simbi pombi uye polychlorine ethylene yekumwa pombi yemvura.
1. Mvura yekunwa isina njodzi mumaruwa nemapombi emvura yekunwa mumadhorobha nekumaruwa.
2. Guta remvura pombi network network, kambani yemvura, waterworks.
3, chemakemikari, kemikari faibha, chikafu, masango, kudhinda uye kudhaya, pharmacy, mwenje indasitiri, kugadzira mapepa, simbi uye mamwe maindasitiri feed-emvura mapaipi ekufambisa.
4, post uye terevhizheni kutaurirana mitsara, simba waya casing casing.
5, Trenchless pombi jacking, yakajairika ndeye kuyambuka Trenchless engineering, uye kuyambuka rwizi, nezvimwewo, PE pombi ine kuomarara kwakanaka, yakakwana kuve dhonza pombi.
6. Dhaka rangu rinotakura paipi.
7. Mapaipi ekudiridza ekurima.
9, yepasi sosi kupisa pombi, diki caliber ndiyo yakanyanya, kunyanya de32 caliber ndiyo inonyanya kushandiswa, inoshandiswa sekutenderera pombi yekufambisa mvura
10. Siphon Drainage. Mafekitori makuru mazhinji ikozvino anosanganisira siphon drainage system. Pe pombi inoshandiswa seye drainage pombi, uye kuomarara kwayo uye kuomarara zvakakwirira kupfuura PVC. Naizvozvo, mu siphon drainage chirongwa, PE pombi ndiyo huru pombi.
Iwo mashandiro eminda uye zvakanakira simbi waya mesh mafupa PE anoumba mutopota ndeaya anotevera:
Simbi waya pajira riya polyethylene rinoumba mutopota unogadzirwa nemhando yepamusoro-simbi simbi ine kuruboshwe uye kurudyi zononoka dhizaini sisitimu sekusimbisa, yakakwira density polyethylene (HDPE) se matrix, uye yakakwira kuita HDPE yakagadziriswa yekubatanidza resin, Rudzi rutsva rwechubhu ine yekunze yakakwirira arambe achirema polyethilini zvakabatana. Application Makuriro simbi waya pajira riya mapfupa Pe rinoumba mutopota
1.Mainjiniya Injiniya: kupihwa kwemvura mumaguta, kupisa netiweki kudzosa mvura, gasi uye gasi chaiyo yekuendesa mapaipi.
2. Chemical Injiniya: Maitiro machubhu uye anoburitsa machubhu ekutakura magasi anoparadza, zvinwiwa uye hupfu hwakasimba mumaindasitiri akadai seacid, alkali, kugadzira munyu, petrochemical, kemikari fetiraiza, chemishonga, kemesita, rabha uye mapurasitiki, nezvimwe.
3. Munda weoiri uye munda wegesi: tsvina yemafuta, gasi remumunda tsvina, mafuta uye gasi musanganiswa, yechipiri neyepamusoro tertiary oiri uye gasi kuunganidza uye nzira dzekufambisa mapombi.
4. Thermal Power Injiniya: gadziriso yemvura, yekumashure yekufambisa, kubviswa kweguruva, zvisaririra zvemarara nedzimwe pombi dzekufambisa.
5. Metallurgical migodhi: inoparadza svikiro zvifambiso mune isiri-ferrous simbi simbi uye ore pulp uye tailings maitiro epombi.
6. Expressway: yakavigwa drainage pombi, tambo pombi
7.Uinjiniya hweMarine: kutakurwa kwemvura yegungwa, mapaipi epasi pegungwa uye oparesheni (yemagetsi) tambo dzemadhiri, nezvimwe.
8. Ship kugadzira: tumira pombi yetsvina, dhiipi pombi, ballast pipe, ventilation pipe
Iwo ekushandisa minda uye zvakanakira Mesh simbi ubvise polyethylene rinoumba mutopota ndeaya anotevera:
Yepasi simbi ubvise polyethylene rinoumba mutopota chinhu chinoumbwa nenyere pamwe pajira riya welded nechando akakungurusa simbi ubvise sezvo Akazadzisa mafupa uye rinoumba thermoplastic. Nekuda kwekuunzwa kwemafupa akasimbiswa, simba rekumanikidza repombi rakanyatsogadziriswa, mhando dzakasiyana uye mabhureki epurasitiki epurmoplastic anogona kushandiswa kugadzira mapaipi akaumbika ane zvinangwa zvakasiyana.
Mvura inopa mesh simbi dhinda epurasitiki rinoumbwa pombi sisitimu inotora yakatumirwa PE80 kana PE100 giredhi zvinhu, zvakagadzirwa zvinoenderana nebhizinesi zviyero, zvine yakanaka weldability, kwezvakatipoteredza kunetseka kupwanya kuramba uye nekukurumidza kurwisa kuramba, yayo yekuita indekisi inopfuura yekuita indekisi yeiyo yakachena PE mvura yekupa pombi.
1. Hupenyu hwakareba hwebasa, pasi pemamiriro akajairwa, unogona kusvika makore makumi mashanu.
2. Iyo hutsanana uye inogadzirisa dambudziko rechipiri kusvibiswa kwemvura yekunwa.
3. Rusvingo rwemukati rwakatsetseka, kuyerera kwemvura kushoma, uye kurasikirwa kwemusoro kuri 30% pasi pane iyo yepombi yesimbi.
4. Kurema uremu uye nyore kubata.
5.Kuvaka kwakanaka, yakapusa kuitisa nzira uye yakaderera yakazara projekiti mutengo. Ruvara rwepaipi chena, nhema kana ruvara rwakabvumiranwa nemapato ese.
Iwo ekushandisa minda uye zvakanakira yesimbi mafupa PE anoumba mutopota ndeaya anotevera:
Simbi skeleton polyethylene composite pombi inoreva mhando nyowani yemubatanidzwa pombi inodarika yakasimba-simbi simbi mabara pane iyo polyethylene yepombi pombi uye inovhara yekunze dura ne polyethylene kesi.
1. Kwakanaka tembiricha kuramba: apo tembiricha inokwira yekuratidzira svikiro yakafanana, kudzikiswa kwesimba kwakapetwa kanopetwa kaviri pane iyo ye polyethylene pombi.
2. Kuzvimiririra kwakanaka: Mushure mekusimbirwa kwepasi pevhu, zvakajairika magineti ekudzora michina yekuedza inogona kushandiswa kutsvaga nekutsvaga, kuitira kudzivirira kukuvara kunokonzerwa nekumwe kucherwa kweinjiniya;
3. Kugadzikana uye kwakapfava kugarisana: iyi pombi ine kusagadzikana kwakanaka uye kusagadzikana kusagadzikana, uye haityi kudhumhana panguva yekuisa uye kushandisa; Inogona kushandiswa sepombi yepamusoro.
4.Kuderera kwekuyerera kushomeka: iko kusimba kwemukati memukati yesimbi maseru macomputer pombi inongova 1/20 yeiyo yesimbi pombi, uye hapana kuyerwa kana kuiswa wax, uye iko kutakura kugona hakuzodonhe nekuda kwetsvina, kuyera, nezvimwewo, saka, iyo simbi skeleton rinoumbwa pombi ine yakakwira fluid kutakura kugona uye inoshamisa simba yekuchengetedza mhedzisiro;
Iwo ekushandisa minda uye zvakanakira PE electrofusion pombi fittings uye PE simbi skeleton pombi fittings ndeinotevera:
Pe electromelting pipe fittings ipurasitiki (polyethylene) pombi fittings inogona kunyungudika kuti ibatanidze kuburikidza netembiricha inogadzirwa neazvino. Nekuda kwemutengo, PE inopisa inyauka pombi fittings zvinoshandiswa kupfuura PE inopisa inyauka mutopota fittings muinjiniya maficha, asi emagetsi nyungudika mutopota fittings inoita basa rakakosha uye risingachinjike muinjiniya nekugadzirisa, kunyanya mukuvaka, fused pombi fittings hainyanyo kukanganiswa nenzvimbo yekunze uye zvinhu zvevanhu, saka vane kuvimbika kuri nani uye vanozivikanwa zvakanyanya nevashandisi. Magetsi anonyungudutsa pombi fittings ari kuwedzera kushandiswa kunyanya mugesi pombi mainjiniya.
1. Corrosion kuramba: hupenyu hwakareba hupenyu;
2.Hapana kuburitswa pajoinhi: kubatana kwemagetsi yakanyunguduka pombi fittings inogamuchirwa, izvo zvinonyanya kuvimbisa kuzivikanwa kweiyo interface yezvinhu, chimiro uye mutumbi wepombi wePe pombi system, uye inoziva kubatanidzwa kweiyo mubatanidzwa nepombi;
3.Kushanda kwakasimba kwekufamba kwepasi pevhu uye mutoro wekupedzisira: mushure mePI pombi sisitimu inosunganidzwa neyakagadziriswa nzira, mubatanidzwa wakatarwa nenzira iyi unopokana nekupedza mutoro uye hapana kubatana kwekubatana kuchaitika. Panguva imwecheteyo, kushushikana kwekuzorodza hunhu hwe PE kunogona kunyatso kupedza kushushikana kuburikidza nekushanduka. Naizvozvo, muzviitiko zvakawanda, kunamira kunodhura hakudiwe pazvibatanidzwa uye kukotama. Kune rimwe divi, zvichibva pakukakama kwaro kwakakura, kukwirisa panguva yekuzorora kazhinji kunodarika 500%, uye PE pombi sisitimu ine simba rakanyanya kuchinjika kune isina kukwana kugadziriswa kwepombi yepasi.
Iwo mashandiro eminda uye zvakanakira PE inopisa inopisa yakanyungudutswa fittings uye PE gasi pombi fittings ndeinotevera:
Iyo yekugadzira nzira ye PE inopisa inyauka pombi fittings ndeye-imwe-nguva jekiseni kuumbwa nejekiseni jekiseni muchina. Chinhu chikuru chakasvibirira chakakwirisa polyethilini (HDPE), uye maumbirwo ekubatanidza ndeaya:
1. Kubatana kuri nyore
2. Yakachipa pane yakasunganidzwa pombi fittings
3. Chete PE pombi fittings
Iwo ekushandisa minda uye zvakanakira simbi-epurasitiki pombi fittings ndeinotevera:
1. GI-yakarongedzwa (yakavharwa) mapaipi epurasitiki simbi inogona kunyatso kupa kutamba kuzere kune echimakanika simba esimbi uye ngura kuramba zvinobatsira zvepurasitiki. Ipapo iyo yakasanganiswa pombi nepurasitiki hazvigone kubatanidzwa zvachose. Izvi zvinonyanya nekuti iko kuganisana kwekuwedzera kwekushisa kwepurasitiki kunenge kakapetwa kagumi pane simbi. Munguva yekuita kwekudzokororwa uye kuenderera kwekuwedzera kwekushisa uye kutonhora kudzvinyirira, pachave nekubvisa uye kupatsanura zvishoma nezvishoma. Iyo pombi yepurasitiki inotambanudzwa uye inobudikira kubva muchikamu muzhizha, munguva yechando, kudzosa uye kufumura iyo yemukati madziro yesimbi orifice inokonzeresa iyo orifice uye pombi fittings kuve nyore nyore kukanganiswa.
2. Stainless simbi-epurasitiki yakakomberedzwa pombi zvakare ine chiitiko chekudonhedza kwepombi fittings inokonzerwa nekupisa kwekuwedzera uye kutonhora kudzora. Panguva imwecheteyo, kupisa kwekushisa uye kutonhora kutapudza kunokonzeresa kupatsanurwa kweSS pombi uye yemukati epurasitiki pombi kuburitsa mukaha, uye mvura inopinda musiyano kuburikidza nepombi yakabatana, ichikonzera kutu kweiyo isina simbi gwanza, ichikanganisa hupenyu hwebasa repombi. .
3.Purasitiki-yakavharwa composite simbi pombi inoshandiswa mumaguta dhirivhari yemvura, yekugara neyemaindasitiri emvura ekugovera mapurojekiti, uye zvakaitwa zvakanyanya nezvikumbiro zvikwata uye vagari. Rudzi urwu rwekuputira kwepurasitiki pamadziro emukati epombi yemvura ine adhesion yakasimba, yakasimba kompasi uye yakanaka kupisa ngura, pasi pesimba rekunze, kupfeka hakureruke, kubvisa, kudonha, kutyora uye zvimwe zviitiko, uye kupfeka hakusi -ine chepfu uye yakasviba-isina, uye hazvisi nyore kuunganidza sikero. Iyo pombi yekufungidzira yekuendesa mvura. Ngura inodzivirira, isina kusvibiswa, isina nyore kuyera, ichivandudza zvikuru mhando yemvura yekunwa, ichideredza marara emidziyo yemvura, inoenderana nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza nekuvandudzwa kwenzvimbo dzekugara dzenyika. Panguva imwecheteyo, iyi pombi ine yakanaka yekumisa ngura, hupenyu hwebasa hwakapetwa katatu kupfuura hwakajairwa GI pombi.